Indawo ephakathi nendawo iSerene Cabin/11 acres eHills - I-Airbnb
Indawo ephakathi nendawo iSerene Cabin/11 acres eHills
Hill City, South Dakota, i-United States
U-Connie uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
Ikhabethe lethu lezingodo ezine lizungezwe ihlathi lesizwe futhi lilala okungu-10+. Indawo ekahle yokuletha abangani noma umndeni futhi uthole ukuthula! Eduze nokudoba, ukuhamba eqhweni, ukushushuluza, ukuzingela, ukugibela izintaba, i-Deadwood, i-Sturgis nokuningi. Inekheli le-Airbnb le-Hill City kodwa itholakala ku-17miles ukusuka e-Lead/Deadwood (amadolobha aseduze). IHill City iqhele ngamakhilomitha angaba ngu-25 kanti iRapid City iqhele ngamakhilomitha angaba ngu-35.
Kunoma ibuphi ubusuku obunikeziwe ungabona izigidi zezinkanyezi uhlezi esihlalweni esikuvulandi noma phansi ngasemgodini womlilo. Ekuseni noma kusihlwa akuvamile ukubona umndeni wezinyamazane uzulazula egcekeni.
Igumbi lokulala elikhulu (umbhede wenkosi) liphezulu endaweni ephakeme enegumbi layo lokugezela kanye nesifundo; amakamelo okulala amabili esitezi esikhulu (elinye elinendlovukazi, elinye elinendlovukazi kanye nombhede ogcwele/amawele) kanye negumbi lokugezela eligcwele, ikhishi, indawo yokudlela, kanye negumbi lokuphumula; Igumbi elingaphansi linelinye igumbi lokulala (umbhede wendlovukazi) kanye negumbi lokugezela eligcwele kanye negumbi lokuhlala elincane. Wonke amagumbi okulala anama-TV nezidlali ze-DVD kanti amanye amagumbi amakhulu namakamelo okulala ama-2 anesathelayithi.
Inqwaba yemifudlana namachibi aseduze ukuze udobe noma uqashe isikebhe phakathi nosuku ehlobo. Ebusika yakha i-igloo egcekeni, uqashe izinqola zeqhwa futhi uhambe ngomkhumbi ohlelweni olukhulu kunazo zonke ezweni, noma uhambe ngokushushuluza/ushubhile kwenye yezintaba ezimbili imizuzu engu-20 wehla ngomgwaqo. Sicela uzizwe ukhululekile ukucela ezinye izincomo njengoba ziyahlukahluka kuye ngesizini.
I-Moonshine Gulch Saloon (3 miles)
Isaluni No. 10 (20 miles)
I-Sturgis (30 miles)
Sinomndeni oseduze ukuphendula imibuzo futhi sitholakala nge-imeyili
Hlola ezinye izinketho ezise- Hill City namaphethelo